Family Radio • Afaan Oromo / Oromiffa(a) / Afan Boran / Afan Orma • Hoolota Waaqayyoon Sooraa
Dubbisa Macaafa Qulqulluu
© 2012 Family Stations Inc. Mirgii isaa Seeraan kan eegameedha. Fuullii Yeroo Xumuraaf kan haaroome:
“Si’a sadaffaas Yesuus, Siimoon ilma Yohannis, ana jaalattaaree? Jedheen. Phexros immoo waan inni si’a sadaffaa 'Ana jaalattaa ree? ittiin jedheen in gadde; deebisee immoo, Gooftaa, ati waan hundumaa in beekta; akkan si jaalladhus atuu in hubatta jedheen. Yesuus immoo, Hoolota koo tiksi!”
Yohannis 21: 17
“Ergasii mootichi warra mirga isaa jiraniin, ‘Isin yaa warra abbaa kootiin eebbifamtanii, kottaa! Mootummaa isaa isa uumama biyya lafaatii jalqabee isiniif qophaa’etti galaa! Beela’een ture, nyaata anaaf kennitaniittu; dheebodheen ture, dheebuu na baaftaniittu; orman ture, akka nama keessanitti na simataniittu. Qullaa koo ta’eem ture,daara na baaftaniittu; dhukkubsadheen ture, na gaafattaniittu; hidhaneen ture gara koo dhuftaniittu’ jedhe.”
“Hoolonni koo sagalee koo in dhaga’u, ani isaan beeka, isaanis na duukaa in bu’u.Ani jireenya bara baraa isaaniif nan keenna, isaan bara baraan hin badan, namni tokko illee harka koo keessaa isaan hin butatu.”
“Isin yaa warra karra xinnayyoo nana! Kana keessaa hin sodaatinaa; abbaan keessan mootummaa isaa isiniif kennuu jaallateera.”
“Waaqayyo tiksee koo ti, ani homaa hin dhabu.Inni marga lalisaa keessa akkan boqodhu in godha, gara laga itti aara galfataniittis na geessa; Inni lubbuu anatti in deebisa, maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaa irra na geggeessa.”